दिवाकर र दीपिकाको प्रेम: कफी हाउसदेखि विवाह मण्डपसम्म - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
कृष्ण आचार्य फागुन १
दिवाकर र दीपिका
ऐश्वर्या फिल्मका लागि निर्देशक दिवाकर भट्टराईलाई नायिका चाहिएको थियो। सोही क्रममा उनीकहाँ एउटा फोटो आयो। फोटो फिल्मका छायाँकार सुदीप बरालले उनलाई पठाएका थिए।
फोटो हेरेपछि दिवाकरलाई ती युवती निकै आकर्षक लाग्यो। सुदीपसँग उनीबारे सोधपुछ गरे। फोन नम्बर पत्ता लगाए। र, फोन गरेर भेट्ने प्रस्ताव राखे।
ती युवती थिइन्, दीपिका प्रसाईं। जो छोटो समयमै चर्चामा आइन् र नेपाली सिने क्षेत्रमा आफूलाई सफल नायिकाको रुपमा स्थापित गर्न सफल भइन्। त्यतिमात्र होइन, दिवाकर र ऐश्वर्या प्रेममा पनि परे।
दिवाकरको मनमा दीपिका
बानेश्वरको एक कफी हाउसमा पहिलो पटक उनीहरुबीच भेटघाट भयो। दिवाकरले दीपिकालाई ऐश्वर्या फिल्मबारे सबै कुरा बताए। साथै, फिल्ममा नायिकाको रुपमा खेल्ने प्रस्तावसमेत उनी सामु राखे ।
दिवाकरको कुरामा दीपिका विश्वस्त भइन्। त्यसपछि दीपिका दिवाकरको फिल्मकी नायिका बन्ने पक्का भयो।
फिल्म गर्दा नायक, नायिका र निर्देशकलगायतका सबै टोली एकै परिवारका सदस्यको रुपमा बस्नुपर्छ। आपसी साथ, सहयोग, हौसला, सल्लाहसुझाव आदानप्रदान गर्नुपर्छ। दीपिका फिल्मी क्षेत्रमा नयाँ थिइन्, उनलाई दिवाकरले गाइड गर्न थाले।
‘काम गर्ने सिलसिलामा नै हामी आपसमा निकट हुँदै गयौँ, एकअर्कालाई बुझ्दै गयौँ’ दिवासकर भन्छन्, ‘उहाँको बानी–व्यवहार, प्रस्तुत हुने शैली, कामप्रतिको लगनशीलताले मलाई लोभ्यायो।’
उनी राम्री छँदै थिइन्। फिल्मको सुटिङको क्रममा दिवाकरले दीपिकामा एउटी श्रीमतीमा हुनुपर्ने सबै गुण देखिसकेका थिए। अझ भनौँ, उनको मनमा दीपिकाप्रति प्रेमको टुसा पलाइसकेको थियो। उनी आफैभित्र रोमाञ्चित हुन थालिसकेका थिए।
दिवाकर दीपिकालाई प्रेमिका भन्दा पनि जीवनसाथीको रुपमा हेर्थे। किनकी उमेरले प्रेमको उन्मादभन्दा धेरै काँधमा जिम्मेवारी थपिदिएको थियो। दिवाकरको मनमा प्रश्न खेल्थ्यो, ‘उनलाई जीवनसाथी बनाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला?’
यता दीपिकाले पनि दीवाकरलाई कुशल श्रीमान्को रुपमा हेरिसकेकी थिइन्। उनको मनमा पनि दिवाकरप्रतिको भावना उस्तै थियो। तर, उनी व्यवहारमा त्यो कुरा देखाउँदैनथिन्।
दिवाकरसँग सोच मिल्नु दीपिका उनीप्रति आकर्षित हुनुको पहिलो कारण थियो। अर्को कारण दिवाकर उनलाई आफ्ना बुबाकै जस्तो स्वभावका ब्यक्ति लाग्थे।
दीपिका आफ्ना बुबालाई आफ्नो ‘आइडल’ नै मान्थिन्। त्यसैले पनि होला, बुबाको जस्तै गुण भएका दिवाकरप्रति उनको मनमा पनि केही कुराहरु खेले।
दीपिका भन्छिन्, ‘मलाई उहाँको ‘रियालिटी’ मन प¥यो। उहाँ आफू जे हुनुहुन्छ त्यही रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो।’
फरक खालको प्रस्ताव
दिवाकरले दीपिकासामु प्रेम प्रस्ताव राखेनन्। दीपिकाले राख्ने त कुरै थिएन। आफूभन्दा सिनियर, त्यसमाथि केटीहरु मनको कुरा त्यति सजिलै बाहिर ल्याउँदैनन्। केही समय यत्तिकै बित्यो।
एकदिन दिवाकरले दीपिकासामु आफ्नो मनको कुरा पोखे। ‘मैले तिमीलाई आफ्नो जीवनसाथीको रुपमा देखेको छु, यदि तिमीलाई म उचित लाग्छु भने...’ उनले भने, ‘तिम्रो विचार के छ?’
दीपिका पनि दिवाकरलाई ‘यो मान्छे जेन्युइन’ छ भन्ने लाग्थ्यो। दिवाकरले जीवनसाथी बन्ने प्रस्ताव गर्दा उनी अझ बढी आकर्षित भइन्। दिवाकरको प्रस्तावलाई सहजै स्वीकारिन्। मनभित्र टुसाउँदै गरेको प्रेमले पूर्णता पायो।
दुबैले एकअर्काको ‘केयर’ गर्न थाले। घन्टौँ फोनमा गफिने र ‘म्यासेज’ मार्फत् प्रेम आदानप्रदान गर्न थाले। दुबै फिल्मी क्षेत्रमा भएकाले बेलाबेला सामूहिक भेट हुन्थ्यो। तर, दुबैले आफ्नो प्रेम कसैलाई थाहा नदिई लुकाएर राखे।
यसको पनि कारण थियो। दीपिकाले भर्खरै करियर सुरु गरेकी थिइन्। दिवाकर पनि स्थापित हुन संघर्ष गरिरहेका थिए। सम्बन्धबारे मिडियामा समाचार बन्दा करियरमा कुनै असर पर्छ कि भन्ने डर थियो।
त्यसैले, समूहमा भेट्दा सामान्य रुपमा ‘हाई-हेल्लो’ मात्र गर्थे।
दिवाकर र दीपिका प्रेममा परेपछि झन्डै एक वर्ष फिल्मकै कामले नजिक भइरहनु पर्ने भएकाले भेटघाटमा असर परेन।
फिल्मको काम सकियो। नियमित भेट हुने बानी परिसकेको थियो। त्यसैले, उनीहरु धेरैदिन नभेटी कसरी बस्न सक्थे? तर, भेट्ने कसरी?
समय मिल्नासाथ भेटघाटलाई नै प्राथमिकतामा राख्न थाले। दुबैलाई मन पर्ने ठाउँहरु घुम्न जान थाले।
‘कहिले हनगरकोट जान्थ्यौँ, त कहिले काठमाडौँदेखि नजिकका अन्य विभिन्न स्थल। जहाँ हामीलाई आनन्द आउँछ, त्यहीँ पुग्थ्यौँ’ दिवाकर भन्छन्, ‘ड्राइभ गरेर बिहान कतै गयो, अनि साँझ घर फर्कियो, यसको आनन्द नै फरक हुन्छ।’
तर, उनीहरु कसैले देख्छ कि भन्नेमा भने सचेत रहन्थे।
यता, सिने क्षेत्रमा उनीहरुको प्रेमबारे गाइँगुई भने चल्न थालिसकेको थियो। केही मिडियाले उनीहरुबीचको प्रेम सम्बन्धबारे समाचार दिन थाले।
आफ्नाबारे समाचार आउन थालेपछि दुबै केही सचेत बने। समाचारको खण्डन पनि गरे। कारण एउटै थियो, ‘कतै करियर बिग्रने त होइन?’
आम मानिसमा फिल्मी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ। त्यसैले, कतै आफूहरुको प्रेमलाई परिवारले नस्वीकार्ने त होइन भन्ने दुवैलाई डर थियो।
यसै सिलसिलामा एकदिन दिवाकरले दीपिकाका भाइलाई भेटे। भाइलाई उनले दीपिकाप्रतिको आफ्नो प्रेमबारे बताए। भाइले दिवाकरको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिए।
जब दीपिकाका बुबाले चाल पाए
दिवाकरलाई प्रेमका हरेक चीजहरु रमाइला हुन्छन् भन्ने लाग्छ। उनका लागि दीपिकासँग बिताएका हरेक पलहरु अविस्मरणीय छन्। त्यसमध्ये पनि दीपिकाको परिवारसँगको भेट, कुराकानी दिवाकारलाई खास महत्वपूर्ण लाग्छ।
दिवाकर र दीपिकाको प्रेमबारे दीपिकाको बुबालाई थाहा थिएन। उनका बुबाले कसैबाट यसबारे सुने। परिवारमा हल्लाखल्ला सुरु भयो। दीपिका अप्ठेरोमा परिन्।
दिवाकरले दीपिकाको फुपु दिदीलाई भेटे। उनलाई आफूहरुको सम्बन्धबारे सबै कुरा सुनाए। साथै, दीपिकासँग प्रेमभन्दा पनि बिहे गर्नु आफ्नो उद्देश्य रहेको बताए।
दिवाकरको कुराले फुपु दिदी आश्वस्त भइन्। उनले तत्काल आफ्ना भाई (अर्थात् दीपिकाका बुबा) लाई फोन गरिन्। केटा आफूलाई मन परेको बताइन्। त्यसपछि बल्ल दिवाकरको मन शान्त भयो। उनीमा खुसीको सीमा नै रहेन।
त्यही क्षण उनलाई जीवनकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण लाग्छ। ‘दीपिकाले मभन्दा धेरै राम्रो मान्छे पाउँथिन् होला, परिवारको आकांक्षा पनि फरक थियो होला’ दिवाकर भन्छन्, ‘तर, म आफ्नो ‘रियालिटी’ मा बसेर उहाँहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गरेँ। र, त्यही कारण उहाँहरुले मलाई सहजै स्वीकार गर्नुभयो।’
रोचक त के भयो भने, दिवाकर पनि फिल्मी क्षेत्रमै रहेको भन्ने थाहा पाएपछि उनका बुबा खुसी भएछन्। छोरीलाई भनेछन्, ‘ल, जे भयो ठीकै भयो, कमसेमस तैँले आफ्नो क्षेत्र बुझ्ने मान्छे पाइस्।’
बुबाले यति भनिसकेपछि उनीहरुलाई ठूलै युद्ध जितेसस्तो भयो।
यता दिवाकरको आमा–बुबासँग भने दीपिकाले कुरा गरिन्। उनले आफूहरु प्रेममा रहेको र बिहे गर्न चाहेको कुरा सुनाइन्। दीपिकाको कुरामा दिवाकरको परिवार पनि ‘कन्भिन्स’ भयो।
परिवारबाट स्वीकृति पाइसकेपछि यसै वर्षको कात्तिक दोस्रो साता टिकाटालो गरे। त्यसयता उनीहरुले ‘कोर्ट म्यारिज’ पनि गरिसकेका छन्। र, २०७६ सालको बैशाखमा नेपाली परम्पराअनुसार विवाह गर्दैछन्।
यहाँसम्म आइपुग्दा दिवाकर र दीपिका दुबै दंग छन्। उनीहरुबीच कुनै विवाद आएको छैन हालसम्म। सानासाना कुरामा चित्त दुखाउने र आँसु खसाल्ने दीपिका पनि अहिलेसम्म दिवाकरका कारण रोएकी छैनन्।
दीपिका आपसी समझदारीका कारण नै सम्बन्धमा कुनै तिक्तता नआएको बताउँछिन्।
दिवाकर पनि आफूले जीवनमा कहिल्यै दीपिकाको मन नदुखाउने कसम खान्छन्।
दीपिकालाई पाएपछि दिवाकरको जीवनशैली नै फेरिएको छ। खाना खाने, सुत्ने, उठ्ने, स्वास्थ्यप्रतिको सचेतना आदि कुरामा दीपिकाले दिवाकरलाई ‘गाइड’ गर्छिन्। दिवाकर पनि दीपिकालाई विभिन्न सल्लाहसुझाव दिइरहन्छन्।
‘उनले मेरो एक्लो जीवनको अभाव पुरा गरेकी छिन् जस्तो लाग्छ‘ दिवाकर भन्छन्, ‘परिवारबाट टाढा रहँदा प्राय पुरुषहरुको जीवन अस्तव्यस्त रहने गर्छ, उनको प्रवेश मेरो जीवनमा भएपछि त्यो कुरा व्यवस्थित भएको छ।’
प्राय प्रेम सम्बन्धहरु आपसी असमझदारीका कारण टुट्ने गर्छन्। दिवाकर र दीपिकाको सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेकै आपसी समझदारी हो। उनीहरुबीच समझदारी र एकअर्काप्रति सकारात्मक भावना छ।
दुबै एकअर्कालाई मन नपर्ने कुराहरु कहिल्यै गर्दैनन्। दीपिका दिवाकरलाई कहिल्यै राम्रो कुरा नगर्न भन्दिनन्, न दिवाकरले नै भन्छन्। कुनै कुरा गलत छ भने त्यो नगर्न उनी दिवाकरलाई सुझाव दिन्छिन्।
त्यसैले त, कुनै समय बार र क्लबमा जान रुचाउने दिवाकरलाई आजभोलि त्यसतर्फ रुची नै छैन।
दीपिका दिवाकरलाई ‘बेस्ट गार्जेनसिप’ भन्छिन्। उनलाई दिवाकरको सबैभन्दा मनपर्ने कुरा पनि यही हो।
दुबै लामो संघर्ष र मेहेनत गरेर यहाँसम्म आइपुगेकाले पनि होला, कामको महत्व राम्रोसँग बुझ्छन्। त्यसैले त दिवाकर सुटिङ सकेर रातको १२ बजे घर आएको चाल पाउँदासमेत उनी कहिल्यै रिसाइनन्।
दिवाकरले निर्देशन गरेको फिल्म ‘क्याप्टेन’ प्रदर्शनको तयारीमा छ। त्यसैले उनी आजभोलि निकै व्यस्त छन्। तर, प्रेमी-प्रेमिका मात्र नभएर प्रेम जोडीहरुका लागि प्रेमिल दिनका रुपमा लिइने ‘भ्यालेन्टाइन डे’ (फेब्रुअरी १४) मा भने दिवाकरले दीपिकाका लागि विशेष योजना बनाएका छन्।
केही मिल्ने साथीहरुसँग दीपिकालाई लगेर उनले काठमाडौँ नजिकै कतै जाने सोच बनाएका छन्। साथै, दीपिकालाई उनले एउटा ‘सरप्राइज’ दिँदैनन्। यसबारे दीपिका भने अनविज्ञ छिन्।
तैपनि दिवाकरलाई दीपिकासँग रहँदा प्रत्येक दिन भ्यालेन्टानजस्तो लाग्छ। प्रेममा हुनेहरुलाई दिवाकर सुख र दुःखको सारथी बन्न सुझाव दिन्छन्।
भन्छन्, ‘हामीजस्तै हरेक जोडिका लागि हरेक दिन प्रेमिल बनोस्। सधैभरि ‘भ्यालेन्टाइन डे’ जत्तिकै उमंग छाओस्।’
प्रकाशित १ फागुन २०७५, बुधबार | 2019-02-13 17:15:04